BREAKING>> के हुन लाग्यो यो हाम्रो देशमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आयो यस्तो खबर - Nepali Sandes
गत माघ २२ गते केन्द्रीय प्रहरी समाचारक्षले अाफ्नाे नियमित बुलेटिनमा एउटा सूचना ‘सर्कुलेट’ गर्‍यो। जसमा भनिएको थियो– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एआर–२७ नम्बरको ट्याङ्करले ठक्कर दिँदा थाई एयरवेजका सिनियर टेक्निसियन सानु बनको मृत्यु भयो।
ठक्करबाट घाइते भएका बनलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले उनलाई त्यहीँ मृत घोषित गरे।गृह सहसचिवकाे नेतृत्वमा गठित छानवीन समितले तीन महिनापछि साे ‘मृत्यु’ हत्या भएकाे खुलासा गरेकाे छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा भइरहेको साढे ३३ केजी सुन गायब प्रकरणका क्रममा उनको हत्या भएको निष्कर्षमा छानवीन समिति पुगेको हाे।
हत्या भएका ५५ वर्षे बन थाई एयरवेजका बरिष्ठ प्राविधिक थिए। थाई एयरवेजको ग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ इक्विपमेन्ट राख्ने स्थान नजिकै उनलाई एटिएफ बोकेको ट्याङ्करले ठक्कर दिएको प्रहरी मुचुल्कामा उल्लेख छ। विमान उडान अवतरण गर्ने त्रिभुवन विमानस्थलभित्र सवारी साधनकाे ठक्करबाट मारिएका सम्भवत: उनी पहिलाे व्यक्ति हुन्।
सवारी चाप नहुने विमानस्थलभित्र चुस्त ब्रेक रहने ट्यांकरले ठक्कर दिएकाे विषय अाफैँमा शंकास्पद छ। कोटेश्वर निवासी उनको मृत्युपछि प्रहरीले घटनालाई रहस्यमय रुपमा ट्विस्ट गराई गुपचुप पारेको तथ्य अनुसन्धान समितिले पाएको छ। स्रोतकाअनुसार याे घटनामा प्रहरीका बरिष्ठ अधिकारीकै संलग्नता रहेकाे देखिएकाे छ।
फागुन १८ मा मोरङ, उर्लाबारीका सनम शाक्यको शब बरामद भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। काठमाडौं प्रहरीले खोजिरहेका शाक्यको शव एकाएक फागुन १८ मा धरानमा फेला परेको थियो।
अपराध महाशाखाले खटाएका दुई प्रहरीले धरानमा फेला पारेको शाक्यको शव १९ गते विराटनगर पोखरिया कन्यामार्गमा सार्वजनिक गरेको थियो। अपराध महाशाखाले गरेको यो अनुसन्धानको साइनो साढे ३३ केजी सुन गायब प्रकरणसँग जोडिएको थियो। सुन तस्कर नाइके चुणामणि उप्रेती (गोरे) को समूहले यातना दिँदा शाक्यको मृत्यु भएको प्रहरी निष्कर्ष छ।
त्यसपछि सरकारले गृह सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वमा बनेकाे छानवीन समितिले अहिलेसम्म २१ जना संदिग्धलाई पक्राउ गरेर बयान लिएको छ। तस्कर समूहले लामालाई प्रयोग गरी बनको हत्या गराएको बयान पक्राउ आरोपीले दिएका हुन्। समिति अहिले लामाको खोजीमा छ।
साढे ३३ केजी सुन गायब प्रकरणमा बनसहित ज्यान जानेकाे संख्या तीन पुगेकाे हाे। सनम शाक्य, सानु बन र प्रेमराज चौधरीले ज्यान गुमाएका हुन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगरको हिरासतमा राखिएका नेपाल एयरलाइन्सका लोडर चौधरीले बिहीबार आत्महत्या गरेका थिए। यद्यपि यसकाे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
सम्बन्धित खबर : साढे ३३ केजी सुन गायब प्रकरण: हिरासतको रहस्यमय मृत्युले अनुसन्धान ‘ट्विस्ट’
स्रोतकाअनुसार विमानस्थलबाट थाई एयरवेज र नेपाल वायु सेवा निगमका ग्राउण्ड हयाण्डलिङ र मेनटिनेन्सका कर्मचारीको सहयोगमा दैनिक ठूलो परिमाणमा अवैध सुन भित्रिने र बाहिरिने भएको थियो।
यसमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन, प्रहरी, भन्सार र अन्य निकायका कर्मचारीले समेत हिस्सा पाउँदै आएका थिए।किन पक्राउ पर्दैनन् सुन तस्कर उप्रेती? साढे ३३ किलो सुन गायब प्रकरणमा पक्राउ २१ मध्ये न्युरोडको आरके ज्वैलर्स र जय माता दी गोल्ड प्यालेसका संचालकद्वय राजेन्द्र शाक्य र पवन अग्रवाल पनि छन्। उनीहरूसँग बयान लिने काम भइरहेको स्रोतले बतायो।
२०७३ पुस २१ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकबाट बरामद गरेको साढे ३३ किलो सुन बरामद प्रकरणसँग जोडेर यो घटनालाई हेरिएको छ। सुनको परिमाण मात्र होइन घटनाका मुख्य आरोपी पनि एकै छन् अर्थात् चुडामणि उप्रेती।
रोचक पक्ष के छ भने युएईबाट आएको सुन तस्करीमा उनको नाम जोडिए पनि उप्रेती पक्राउ परेनन्। उनी प्रहरीकै उच्च अधिकारीको संरक्षणमा थिए। यतिसम्म कि उप्रेती नै प्रहरीलाई अवैध सुनको सूचना दिने एक व्यक्ति थिए। नेपाल खबरले खबर छापेको छ ।
माघ ७ मा हवाईमार्गबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएपछि स्थिति फरक भएको हो। तर प्रहरीले तत्कालै उनलाई छानवीन दायरामा किन लिएन? प्रहरी अधिकारीले कराेडाैं रूपैयाँ उनीसँग बार्गेनिङ गरेकाे तथ्य समितिले पाएकाे छ। गृह सहसचिव पौडेल नेतृत्वको समतिले अहिले यी सबै तथ्यको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। साझापेजबाट
Mon-Apr-2018, 11:12 am मा प्रकाशित, 15 जनाले हेर्नुभयो